သငျသညျ sarcoidosis နှင့်အတူခရီးသွားစိုးရိမ်ပူပန်နေကြသည်ဆိုလျှင်, booking မီသင့်မိသားစုဆရာဝန်သို့မဟုတ်အတိုင်ပင်ခံနှင့်တိုင်ပင်ပါ။ သင်တို့သည်လည်းသင်တို့အားရှေ့ဦးစွာဖုံးလွှမ်းစေနိုင်သည်ကိုသေချာစေရန်ကျန်းမာရေးအာမခံပေါ်လစီများကိုစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
ဥရောပစီးပွားရေးဧရိယာသို့မဟုတ်ဆွစ်ဇာလန်၏နိုင်ငံများရှိသင့်ပါတယ်ခရီးသွားလာမည်သူမဆို - ခရီးသွားလာမတိုင်မီကောင်းသောအချိန်အတွက် - ဥရောပကနျြးမာရေးအာမခံကဒ် (EHIC) ရရှိရန်။ ဤသည်ကိုမကြာခဏအထူးသဖြင့်အခြေအနေများအောက်တွင်အချို့သောအခြားနိုင်ငံများမှ၏အမျိုးသားရေးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုရန်သင့်အားဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပေးနိုင်ပါသည် - ဒါပထမဦးဆုံးစစ်ဆေးပါ။ အဆိုပါ NHS က်ဘ်ဆိုက်ထက်မလိုအပ်ဘဲပိုက်ဆံယူပါလိမ့်မယ်သူကိုတရားမဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များအားဖြင့်သင်တို့၏ကဒ်အမိန့်သတိရပါ။
အဆိုပါ EHIC အပေါ် NHS လမ်းညွှန်မှု။
The EHIC is no substitute for private health insurance. The insurance providers listed below are reported to offer travel insurance to people with pre-existing medical conditions. SarcoidosisUK has မဟုတ် been in contact with any of these companies. The list is provided for information only and does not constitutearecommendation.
အားလုံး Clear ကိုခရီးသွား
ခရီးသွားအာမခံမှ OK ကို
ခရီးသွားအကြံဉာဏ်များအတွက် NHS Fit
ခရီးသွားကာကွယ်ဆေးထိုးအပေါ် NHS အကြံဉာဏ်